Tongasoa eto Baishiqing
Fujian Jinjiang baishiqing akanjo fanenomana Co., Ltd.dia hita any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Sina, mifanila amin'ny Faritanin'i Zhejiang any avaratra atsinanana, faritanin'i Jiangxi any avaratra andrefana, faritanin'i Guangdong any atsimo andrefana ary mifanatrika amin'ny faritanin'i Taiwan manerana ny Selat Taiwan any atsimo atsinanana. Ny orinasa dia naorina tamin'ny taona 1990, manana mihoatra ny 30 taona ny manan-karena fanamboarana akanjo akanjo, izahay dia famokarana matihanina karazana akanjo ba sy atin'akanjo lehibe. Ny velarantany fananganana dia 15000 metatra toradroa.
Manana karazany telo lehibe izahay
atin`akanjo, akanjo yoga sy akanjo ba
Famolavolana atin'akanjo ifikirantsika:mifikitra amin'ny endrika vatana, hatsarana ao am-po; ny fampiasana lamba ifikirantsika: aina sy lavorary, fahasalamana aloha. Amin'ny lafiny teknolojia,mifikitra amin'ny:mamaritra ny vatana lavorary, matoky tena ary miaraka foana. Safidintsika ny lamba avo lenta hanamboarana akanjo yoga, izay afaka maina sy miala rivotra haingana. Mety amin'ny hazakazaka, yoga, mitsambikina, fitaovana fanatanjahan-tena ary fanaovana fanatanjahan-tena hafa.
Samy afaka manao akanjo milomano ireo zazalahy sy zazavavy. Ny endri-damba: malefaka, mahazo aina, maina haingana, tsy misy poizina. Ny fomba famolavolana no be mpitia indrindra ankehitriny.
Ireto voalaza etsy ambony ireto ny vokatray, amin'ny indostria ary ny mpividy dia avy amin'ny mpividy isan-karazany deraina sy dera.
Tongasoa eto amin'ny Manontany
Mission: Angony ireo izay manana finoana iraisana ary miezaha hanana fahitana iraisana; Manamboara rafi-pamokarana tonga lafatra hanomezana akanjo sy serivisy avo lenta; Mamorona fiainana tsaratsara kokoa amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika!
Filozofia Fampandrosoana: Tazomy miaraka amin'ny sisiny fifaninanana isan-karazany, mifikira amin'ny fampandrosoana fatratra.
Value: Ny fahamendrehana sy ny fahamarinana Mpanjifa voalohany Miasa mafy ny olona
Enterprise Spirit: Izahay dia manao! Afaka ataontsika!
Layout an'ny orinasa
Efitrano fampisehoana ohatra
Masinina faribolana lehibe